Mety mila manam-pahaizana momba ny marketing amin'ny mailaka ianao raha ...
Mety mila manam-pahaizana momba ny marketing amin'ny mailaka ianao raha…
Zoma Janoary 8, 2010 Sabotsy, Oktobra 18, 2014 Scott Hardigree
Ity lahatsoratra ity dia natao ho loharanom-pahalalana ho an'ireo izay, ekena, mahafantatra fa mety hahazo lanja bebe kokoa amin'ny fantsona mailaka izy ireo. Tsy maninona na manapa-kevitra ny hanakarama matihanina ivelany, toy ny an masoivohon'ny marketing amin'ny mailaka, na talenta ao an-trano; ity torolàlana ity dia hanampy anao hanombatombana sy hanombatombana ny ezaka marketing amin'ny mailakao ankehitriny.
Andao hojerentsika ny isa
Ny mailaka dia sehatry ny asa marketing nandritra ny folo taona, ary tsy azo ovaina izany atsy ho atsy. Io dia mamela ny famitana tanjona satria entin'ny angona izany. Mahatonga ny varotra mivantana izany. Manangana fifandraisana, fahatokiana ary fahatokisana izany. Izy io koa dia manohana ny varotra amin'ny alàlan'ny fantsona mivantana hafa:
Araka ny Fikambanan'ny Marketing mivantana, ny marketing amin'ny mailaka dia namorona ROI $ 43.62 isaky ny dolara nandaniany azy, izany dia indroa noho ny an'ny hazakazaka voalohany.
Famintinana nataon'i MarketingSherpa Hoy ny, Ireo izay mahita ny fahombiazan'ny programa mailaka mihena dia azo inoana fa hanana fomba fijery tsy dia lavitra amin'ny fandaminana. Ireo fikambanana izay manana fomba fijery mailaka miorina amin'ny fampiasam-bola dia mahazo ny valisoa.
The CMO Council'Report an'ny Outlook Outlook '08 Marketing dia nandinika ny drafitra sy ny hevitr'ireo mpivarotra 650. Ny marketing amin'ny mailaka no faritra kendrena voalohany amin'ny famatsiam-bola.
Amin'ny fanadihadian'ny mpivarotra, Shop.org nanambara fa "Ny mailaka no tetika nahomby indrindra tamin'ny ankapobeny".
Mitantana an-trano ny marketing amin'ny mailaka?
Raha tsy manana fifandraisana misy eo amin'ny maso ivoho ianao na manana talenta ao an-trano ampy dia diniho izao:
Ianao (midika hoe ianao na ny ekipanao) dia mahalala ny orinasanao; mahay tsara amin'ny marketing amin'ny mailaka koa ve ianao?
Raha eny, manana fotoana sy hery ve ianao hanatsarana ny ezaka?
Ahoana no mampitaha ny varotra miharo sy ny CRM amin'ny mpifaninana aminao?
Mahatonga ny varotra ve ny varotra mailakao, manangana tsy fivadihana ary mampihena ny vidin'ny marketing?
Miorina amin'ny fikarohana sy / na angona ara-tantara ve ny programa mailakao?
Mitahiry sa mandany vola ve ny asanao ao an-trano?
Efa manana manam-pahaizana ve?
Raha efa manana masoivohom-barotra na fanampiana any ivelany ianao dia manontania tena hoe:
Manam-pahaizana manokana amin'ny mailaka ve izy ireo sa izy ireo fanompoana feno?
Miteraka ROI mifanaraka amin'ny fikarohana etsy ambony ve izy ireo?
Mieritreritra antsika ve izy ireo nefa tsy amporisihina?
Azon'izy ireo ve ny fizotran'ny tsenantsika sy ny raharaham-barotra?
Efa nandinika sy nanome vola ny safidy rehetra ve izy ireo?
Moa ve ny asan'izy ireo amin'ny fanabeazana vaovao, manaitaitra ary hita taratra amin'ny fomba fanao tsara indrindra?
Sombin'ilay fampitahana amin'ny marketing amin'ny mailaka
Ny marketing amin'ny mailaka dia mety misy ny fandraisana ny mpanjifa, ny fikolokoloana ny fitarihana, ny famerenana ny laoniny ary ny fitazonana azy ireo, ary mazava ho azy ny varotra mivantana, izay midika fa misy dingana sy serivisy marobe tafiditra ao anatin'izany:
Paikady sy fikarohana
Fandaharana momba ny famoahana sy fanentanana
Adikao ny fanoratana sy ny fampandrosoana ny atiny
Tanisao ny fitomboana sy ny fananganana vondrom-piarahamonina
Lisitra fizarana & fanatsarana ny lisitra
Fanehoan-kevitra momba ny fitondran-tena sy ny mpanjifa
Fanaraha-maso ny fandefasana hafatra sy ny fanamoriana
Mpanome tolotra mailaka (ESP) na fanombanana ny vahaolana amin'ny mailaka ao an-trano
Fampiroboroboana ny varotra & Direct / Up / Cross
Fitsapana marobe & fanatsarana ny programa
Raha toa ka mihoatra ny ataonao ity lisitra etsy ambony ity, dia mety ho famantarana matanjaka fa tsy ampiasainao ity fantsona mahasoa ity. Angamba efa tonga ny fotoana ho an'ny mpiara-miasa marketing vaovao na angamba mila mandanjalanja teti-bola ianao ary / na manome fiofanana bebe kokoa ny ekipanao ao an-trano?
Raha tapa-kevitra (ofisialy) ianao fa mila fanampiana dia miarova. Ao amin'ny fizarana faharoa sy farany dia hiresaka momba ny FOMBA hahitana sy hanombatombanana talenta mahafeno fepetra mifanaraka amin'ny zavatra ilainao manokana sy mahafeno ny fameperana tetibolao izahay.
Tags: filankevitra cmofampidirana crmfiarahana mivantanamailaka sy antsinjaranymailaka crmfampidirana mailakamailaka MarketingAgence Marketing amin'ny mailakamanam-pahaizana momba ny marketing amin'ny mailakamailaka miverina amin'ny famatsiam-bolafanatsarana ny mailakamailaka roiMarketingSherpaantsinjaranyshop.org
8 Jan 2010 amin'ny 3:10 PM
Scott - ity no lahatsoratro tiako indrindra mandraka ankehitriny. Torohevitra mahafinaritra! Betsaka ny orinasa miady amin'ny loharanon-karena ananany ary tsy mahatratra ny fahafaha-manaony. Eo no fanapahan-kevitra lehibe foana ny fiaraha-miasa amin'ny manam-pahaizana!
8 Jan 2010 amin'ny 3:41 PM
Misaotra Doug! Ao amin'ny fizarana faharoa dia hasiako toro lalana 8 mitarika amin'ny fanakaramana manam-pahaizana momba ny marketing amin'ny mailaka.